Cali Dheere ‘’ Waan u aargudi doonaa dadkii maanta la laayay mana dhaafi doono cid kasto oo gacan ka geesatay in dadkaasi la Xasuuqo | Salaan Media
Cali Dheere ‘’ Waan u aargudi doonaa dadkii maanta la laayay mana dhaafi doono cid kasto oo gacan ka geesatay in dadkaasi la Xasuuqo
Xarakada Al-Shabaab ayaa si kulul uga hadashay 13-Qof oo Maanta Xukun dil ah lagula fuliyay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari kadib markii Maxkamada Boosaaso dadkaasi ku xukuntay in la dilo markii lagu helay Dambiyo kala duwan oo u badnaa Dilal iyo Qarxayo ee ka fuliyeen Deegaano kamid ah Puntland.
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa uga horeyn ka tacsiyeeyay dadka Maanta la toogtay Eheladii iyo qarabadii ay ka tageen isagoona ugu baaqay Ehelada dadkaasi in ee samraan, waxa uuna ilaah uga baryay in badal qeyr qaba uu siiyo dadkaasi uu xusay in gardaro loo laayay.
Shiikh Cali Dheere oo caawa Shir Jaraa’id qabtay ayaa sheegay in xasuuq maanta uu ka dhacay Magaalada Boosaaso lana laayay dad aan wax dambi ah galin kuwaa uu xusay in qaarkood kasoo jeedaan Boosaaso halka kuwa kalana laga soo qabtay goobo kale ayna ahaayeen dad qaarkood arday ahaayeen qaar kalana ee ganacsi ku jireen.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa toogashada maanta lagu fuliyay 12-nin iyo Haweeney ku sheegay mid lamid ah Xasuuq uu sheegay in Horey Xamar uu uga dhacay lana laayay Dhalinyaro Xabsiyada Dowlada ku xirnaa uu sheegay in Eheladooda lacago la weediistay marka ee ka waayeena ee dadkaasi la laayay tana maanta Boosaaso ka dhacdayna taasi mid lamid ah ku tilmaamay.
Waxa uu sidoo kale Sheekh Cali Dheere sheegay in dhacdada maanta dhacday oo kale hadii laga aamuso ee ka dhacayaan magaalooyin kale, Sida Baydhabo ,Kismaayo isagoona Xusay hadii Shacabka Reer Boosaaso Dilka maanta dhacay oo kale ee fiirsadaan ayna ka hadlin iyagana in sidaas oo kale loo gali doono lana fiirsan doono.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa xusay in aad uga murgoonayaan dadka la dilay , caruurta la agoontoomeeyay kuwana rajo laga dhigay ayna diyaar u yihiin in dadka Maanta Boosaaso lagu dilay ee u aaraan ayna ka aargudi doonaan cid kasto oo gacan ka geesatay in dadkaasi la dilo.
‘’ Cid kasto oo qeyb ka qaadatay dadkii maanta la toogtay ,kuwa jaajuusay ,kuwa amray kuwii marqaatiga ka noqday iyo cid kasto oo arintaasi lug ku laheed waan ka aar gudan doonaa kamana hari doono dadka maanta gardarada lagu laayay dhiigoodana ma ilaawi doono habeen iyo maalina aan ku jiifan doono sidii aan ugu aargudi laheen Dadkii Maanta Boosaaso lagu dilay ‘’ ayuu yiri Afhayeenka Al-Shabaab.
Handadaada Al-Shabaab caawa kasoo yeertay ayaa kusoo aadeysa xili Maanta Boosasao lagu toogtay 13-qof oo mid kamid ah aheed Haweeney kuwaa oo lagu eedeeyay in Al-Shabaab katirsanaayeen ayna Dilal iyo qaraxyo ka geesteen Deegaanada Puntland .